Olee otú Iji Nọrọ Nchekwa mgbe ụgbọala N'oge Winter | Save A Train
Home > Travel Europe > Olee otú Iji Nọrọ Nchekwa mgbe ụgbọala N'oge Winter
(Emelitere ikpeazụ On: 16/01/2021)
Winter bụ zuru okè oge iwu crackling ọkụ, n'enweghị see mkpọda, iru snowmen na snuggle na a mma iko tii. dị mwute ikwu na, ọ bụghị ihe niile fun na egwuregwu. Winter na-emepụta ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị na-aghọ aghụghọ ụzọ ọnọdụ. N'ihi na ọ bụ gaghị ekwe omume n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị na-abanye n'ọnọdụ ezumike ruo mgbe spring, ebe a na- na Atụmatụ ị chọrọ na-esi anọ mma mgbe ụgbọala n'oge oyi.
Nchekwa Driving? Ọnụ Ọgụgụ Ekwela-agha Ụgha
Na-eche na anyị na-akọ gabiga ókè na-enye gị Atụmatụ na Olee na-anọ mma mgbe ụgbọala n'oge Winter? Dabere na Aaa, Winter oké ifufe, ọjọọ ihu igwe, na igh i mma n'anya ụzọ ọnọdụ ndị a na-akpata na fọrọ nke nta ka ọkara nde mkpọka na ndị ọzọ karịa 2,000 ụzọ ọnwụ ọ bụla oyi.
Mkpọ Up Emergency ọnọde gị Car Travel
Mgbe ụfọdụ, gị n'uche na-anọ mma mgbe ụgbọala n'oge oyi ezughị. Anyị na-adị ndụ site na motto, 'Olileanya maka kasị mma, kwadebe maka kasị njọ '. Jide n'aka na ala ụgbọ ala gị bụ ịrụnye na onunu bụrụ na nke ihe mberede. Gụnye a na-ekpo ọkụ blanket, na-ekpo ọkụ uwe, a mbụ enyemaka gaa, a tọọchị ma ọ bụ njali elu, i papuas Gịnị, ihe ice akpụcha, a shọvel, ájá ma ọ bụ kitty-awụba n'oké osimiri na-enye gị traction, na snow n'agbụ. Ị ga-ebu ụfọdụ mmiri, oriri-like ume Ogwe ma ọ bụ nzọ mix-na a chaja ekwentị!
Florence na Levanto Ụgbọ oloko
Florence na La Spezia Ụgbọ oloko
Rome ka La Spezia Ụgbọ oloko
Rome ka Levanto Ụgbọ oloko
Lelee maka Ice on Your Enyo Iji Mụrụ Safe ezie Driving
Nke a bụ a oyi ịnya ụgbọ n'ọnụ na ọkachamara ọdụdọ ogologo ọkwọ ụgbọala na-eji na-ekpebi ma ọ bụrụ na ụzọ ọnọdụ dị oké. Inyocha gị n'èzí enyo. Ọ bụrụ na ice na-amalite na-etolite na enyo, na nke ahụ bụ a-egosi na ice na-akpụ ke okporo ụzọ. Were extra anya na-anọ mma mgbe ụgbọala ma ọ bụ na-eche ruo mgbe ọ tọọ elu ụgbọala.
Brussels na Rotterdam Ụgbọ oloko
Antwerp na Rotterdam Ụgbọ oloko
Berlin na Rotterdam Ụgbọ oloko
Paris na Rotterdam Ụgbọ oloko
Ụgbọala Nchekwa na Nkume Early!
Nke a nwere ike iyi ka ihe doro anya otu, ma anyị maara na ị na-arụsi ọrụ ike na ịnụ ọkụ n'obi na-esi na gị ọzọ ebe. Anyị na-ebe a na-echetara gị ka ya jiri! Otu n'ime ndị anyị isi Atụmatụ na Olee na-anọ mma mgbe ụgbọala n'oge oyi na-enye ohere mmezi oge na-abata na ị na-aga. Njem nwere ike na-aba n'oge oyi karịa oge ndị ọzọ afọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-ezute oké ifufe na ọnọdụ ma ọ bụ oké ụzọ. Na-akwọ ụgbọala na inclement weather bụ nrụgide ezu enweghị kwukwara mgbali nke ịbụ mbubreyo, nke nwere ike ojii gị mma ịnya ụgbọ ala ikpe.
Bremen na Nuremberg Ụgbọ oloko
Leipzig na Nuremberg Ụgbọ oloko
Hanover na Nuremberg Ụgbọ oloko
Hamburg na Nuremberg Ụgbọ oloko
Ụgbọala Nchekwa na Wedata ndọpụ uche
Olee na-anọ mma mgbe ụgbọala n'oge Winter #1 n'ọnụ: Tinyere ala ekwentị gị! Nọgidenụ na-na ekwentị gị na agbanyụrụ ma ọ bụ jikọọ na ala ụgbọ ala gị na Bluetooth-na mgbe gị aka kwụsịrị wheel ma ọ bụ anya ha n'okporo ụzọ na-elele na WhatsApp ozi.
Nọrọ Nchekwa ezie Driving Pụtara Gee ntị Road!
No, na-ege ntị obi gị. Ọ bụghị nke a oge na agbanyeghị. Na-ege ntị n'ụzọ. nkịtị. Taya ka dị iche iche ụda mgbe ụgbọala na snow na ice, nke bụ ihe ọzọ mere ka ị na-radio olu ala maka oyi na-akwọ ụgbọala nchekwa. Snow nēzò ụzọ mkpọtụ kwesịrị dịtụ oké n'ihi snow na-ụkwụ elu. Ọ bụrụ na oké ụzụ na mberede na-akwụsị, i nwere ike kpaliri site snow ka ice. Nọrọ na-ekiri na ihe uda gị na taya na-aga na-n'elu ụzọ ọnọdụ na-agbanwe ngwa ngwa, karịsịa n'oge ma ọ bụ nri mgbe a oké ifufe.
Munich na Basel Ụgbọ oloko
Zurich na Basel Ụgbọ oloko
Bern na Basel Ụgbọ oloko
Geneva na Basel Ụgbọ oloko
Anti-Ifriizi ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọ mma mgbe ụgbọala
Olee otú Nọrọ Nchekwa mgbe ụgbọala N'oge Winter? Jide n'aka gị wiper ọmụmụ nwere mgbochi-akpụkọta, otú ahụ ka ịgba anaghị ifriizi ke oyi ihu igwe. Tụlee ịzụ oyi wiper pupụtara, nke gbochie ice na snow si ekwesi na wiper!
M soro gị Atụmatụ na ka ọkọdọ rapaara
Mgbe ụfọdụ, ihe ndị a cant ẹse. Ọ bụrụ na ị na-rapaara na snow ebe a bụ ụfọdụ ngwa ngwa Atụmatụ:
Nọrọ ụgbọala gị: Ụgbọ gị na-enye nwa oge ndo ma na-eme ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na rescuers chọta ị. Anwala ije ije a oké ifufe. Ọ dị mfe ichefu gị ụgbọala na ịfụ snow ma na-furu efu.
Ekwela overexert onwe gị: Mgbe egwu ala gị ụgbọala, ntị gị ahụ na-akwụsị ma ọ bụrụ na ị na-ike gwụrụ.
Nwee Visible: Kechie ákwà na-acha na-acha na mpi nke ụgbọ gị ma ọ bụ tinye akwa n'elu windo a na-afụkọta iji gosipụta nhụjuanya. N'abalị, na-dome ìhè na ọ bụrụ na o kwere omume. Ọ na-eji obere ego nke ọkụ eletrik na-eme ka ọ dịrị ya mfe rescuers chọta ị.
Kọwaa iyuzucha Pipe: Jide n'aka na iyuzucha anwụrụ na-adịghị clogged na snow, akpụrụ, ma ọ bụ apịtị. A na-egbochi iyuzucha anwụrụ nwere ike ime ka na-egbu egbu carbon monoxide gas ihihi n'ime njem ogige nke ụgbọala mgbe engine na-agba ọsọ.
Nọrọ Ọkụ: Iji ọ bụla dị ka ikpuchi gị ahu si oyi. Nke a nwere ike ịgụnye n'ala ute, akwụkwọ akụkọ, ma ọ bụ maapụ akwụkwọ. Nga-mkpọ blanket na arọ uwe iji bụrụ na nke ihe mberede.
chekwaa Mmanụ: Ọ bụrụ na ọ kwe omume, naanị-agba ọsọ ahụ engine na okpomọkụ ogologo oge iji wepụ jụọla oyi. Nke a ga-enyere iji chekwaa mmanụ.
Car Travel? Eleghara ihe niile anyị kwuru
Gịnị ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ị pụrụ izere niile n'elu hassle nke ọnụnọ mma mgbe ụgbọala? Ọ bụrụ na naanị na e nwere a mode nke iga na ị pụrụ ịwụli jidesie, na-esi na ị na-aga ngwa ngwa na njem n'enweghị. Oh na-eche, enwere! Ọ na-akpọ a ụgbọ okporo ígwè!
Ọ bụ eziokwu na ụgbọala na-enye onwe na ole na ole ndị ọzọ ụdịdị nke transports ime. Ị nwere ike ịga njem tinyere ma unreachable ala gbara osimiri okirikiri ụzọ, isi na-ime obodo nta, na Echegbula onwe gị banyere schedules ma ọ bụ oche-ere si. Ha na-na na-enweghị adịghị ike ha, Otú ọ dị. Lee ọtụtụ ihe n'elu!
Ụgbọ oloko na-nchebe na ngwa ngwa! Ya mere ọ dịghị mkpa na-anọ mma mgbe ụgbọala ma ọ bụrụ na ị na-azụ njem, nwekwara Ụgbọ oloko na-ọzọ ọnụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji Save A Train ka akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè. Mkpa ihe doro? Anyị dere a dum blog on mere ụgbọ okporo ígwè eme njem karịrị ụzọ njem.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsafe-driving-during-winter%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / tr aka / de ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#safetytips #travelingbycar #oyi ịnya ụgbọ europetravel Tranride
Gịnị Ka Ị Na Europe Na February, Travel Atụmatụ
Inzọ Njem Italytali, Inzọ Njem Portugal, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe
Europe Travel N'oge The Spring Season
Ingbọ oloko na Belgium, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Ingbọ ologo Spain, Travel Europe